ISO4427 ọkọlọtọ HDPE dredge / Ngwuputa anwụrụ si dn160-1200mm, welded na flanges na ma ọgwụgwụ, dị na 6m ma ọ bụ 11.8m n'ogologo, customrized ígwè akwado yiri mgbaaka dị, elu àgwà na kacha mma N'ogbe price. Kpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ nke anyị HDPE dredge anwụrụ !!!
HDPE dredging anwụrụ a mere HDPE (elu njupụta polyethylene) ihe onwunwe na e mepụtara dị iche iche akụkụ iji jiri ukwuu n'ime n'elu oké osimiri na-ebu nke oké osimiri ájá dredge nke apịtị. The HDPE dredge anwụrụ ka emebere na welded ka a "HDPE flanged anwụrụ", onye ma nsọtụ na-welded na HDPE Flange nkwụnye & ígwè akwado yiri mgbaaka.
The HDPE dredging pipe nwere ike mfe ka kpọkọtara ma ọ bụ dismountabled, site nweghi elu / anya na bolts / mkpụrụ maka methanical njikọ nke abụọ ígwè akwado yiri mgbaaka na njedebe nke anwụrụ.
SUNPLAST HDPE dredge anwụrụ na-na-na-emepụta 5.8m ma ọ bụ 11.8m lenghts. The anwụrụ nwere ike nyere site dn160-1200mm dị iche iche na mgbidi ọkpụrụkpụ dị ka kwa iche iche SDR & e mere mgbali fim, na omenala mere ígwè akwado yiri mgbaaka dị.
Product aha HDPE dredge anwụrụ
nha maka DN160-1200mm
SDR / mgbali ratings SDR11-PN16, SDR13.6-PN12.5, SDR17-PN10, SDR21-PN8, SDR26-PN6
Top àgwà na-amaghị nwoke PE100 akụrụngwa
Agba maka anwụrụ Black ma ọ bụ-acha anụnụ anụnụ, ma ọ bụ dị ka kwa arịrịọ
Standards maka anwụrụ ISO4427, AS / NZS4130, Bs EN 12201
Standards n'ihi na ígwè na-akwado yiri mgbaaka
Customrized mere dị
Markings na anwụrụ Ahịa si logo nwere ike zọọ
n'omume dị Ee, sample maka obere ibu
mbukota usoro Nkịtị mbupụ mbukota.
The anwụrụ ogologo nwere ike ịbụ na 5.8m ma ọ bụ 11.8m, ma nsọtụ welded na flanges
Production ụzọ oge Dabere na iji ibu.
Banyere 10 ụbọchị n'ihi na a 20ft akpa, 15-20 ụbọchị n'ihi na a 40ft akpa
Akwụkwọ ikike oge 3 afọ maka nkịtị eji
Ịkwụ ụgwọ okwu T / T ma ọ bụ LC na anya
FOB loading n'ọdụ ụgbọ mmiri Ningbo ma ọ bụ Shanghai China
Ebe si Zhejiang, China
SUNPLAST HDPE dredge anwụrụ nwere ike nyere site dn160mm ka 1200mm. The nkọwa dị ka n'okpuru:
Nkịtị Pressure Rating (Mpa)
N'ihi PE100 ihe
Dị ka a ngwọta dị mma maka dredging ọrụ, SUNPLAST HDPE dredge anwụrụ nwere ọtụtụ uru dị ka ndị a:
☑ corrosion eguzogide
☑ High ike
☑ Light ibu
☑ Easy ịgbakọta ma ọ bụ dismountabled
☑ Ezigbo mgbanwe, na-eguzogide ndị scratches ike.
☑Good eyi ndị na-eguzogide mgbidi dị ala esemokwu ọnụọgụ, obere eruba eguzogide, magburu onwe-erute ike.
☑ Low usoro na-eri, na-erughị mmezi efu
Osote: Lowest Price for P235gh Equivalent Steel Pipe - SPA250-4M Manual Butt Fusion Welding Machine – SUNPLAST
Dredging mezuwo HDPE Pipe
Sere n'elu Dredging Pipe
HDPE Dredge ise n'elu Pipe
HDPE Pipe N'ihi Dredge
HDPE poli Pipe
High njupụta polyethylene Pipe
Pee Dredge Pipe
poli Dredge Pipe